Salayam Media Myanmar
+9594500 65515
ပညာတတ်တစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးတဲ့။ ပညာတတ်မှာ ဘာတန်ဖိုး ရှိလို့တုန်း။ ဟိုတုန်းကတော့ ပညာတတ်တွေအား တွေဝေတတ်သူများ၊ မရေရာ မသေချာသူများဟု ယိုးစွပ်ခံရသည်။ ယိုးစွပ်ခံရသည့်အတိုင်း တွေဝေတတ်ခြင်း၊ မသေချာတတ်ခြင်းကား ပညာတတ်တို့၏ ပြယုဂ်(ဝါ)...
အင်္ဂလီကန်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး တိပ်တောင်းမြို့၊ တောင်အာဖရိက။ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ လူတစ်ယောက်ကို အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်တင် ချင်ပြီရင် “ယူ အူနိုဘန်တူ” လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က ခင်ဗျားဟာ “အူဘန်တူ” အရည်အချင်းရှိတဲ့လူပါလို့...
မနက်ဖြန်ခါဆိုရင် ကချင်နဲ့ ရှမ်းမြောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်တာ ၆ နှစ် ပြည့်၊ ပြည်သူတွေလည်း စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ ကိုယ့်အိုးအိမ် ကိုယ့်ဥစ္စာ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို ပစ်ပြီး ပြေးကြရတာလည်း ၆...
ရပ်ရွာများကို ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းများမှတဆင့် ပြောင်းလဲခြင်း မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ တောသားကလေးတွေ တောသူကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေပေါ့။ အဲဒီကျောင်းတွေရဲ့ ပညာရေးကို မြှင့်ပေးရင် တောသားကလေးတွေအဖို့ အတိုင်းထက်အလွန် ဖြစ်မှာပဲ။...
ကနဦး Sustainable Development Goals (SDGs) မဖြစ်ခင်၊ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များ Millennium Development Goals (MDGs) မှာ၊ ၂၀၁၀ အထိ ပညာရေးနဲ့...
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ဦးဆောင်ပြီး ဝါးပင်စိုက်လှုပ်ရှားမှုကြီး စလုပ်မည်
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ဦးဆောင်ပြီး ဝါးပင်စိုက်လှုပ်ရှားမှုကြီး စလုပ်မည် အပူဒဏ် လျှော့ချ အရိပ်ရရန်၊ ရပ်ရွာစိမ်းလန်း စိုပြေ လှပရေး၊ မျှစ်နှင့် ဝါးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်နိုင်ရန် ဝါးအရင်းအမြစ် ပြုစုရန် ဝါးပင်စိုက် လှုပ်ရှားမှုကြီးတရပ်ကို...
ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ ပါတဲ့ "ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး" (sustainable development) ဆိုတာကို ကျမကတော့ "နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် အကျိုးရှိစွာ ကျန်ရစ်မယ့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ" လို့ မြင်ပါတယ်။...
စတုတ္ထတန်းတွဲမရှိလို့ တတိယတန်းတွဲ စီးတာ
ကိုလိုနီခေတ်က အိန္ဒယနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က အိန္ဒိယအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဓီသည် ဆင်းမလားမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတစ်ခုတက်ရန် ဆင်းမလားမြို့သို့ ရထားနှင့်သွားသည်။ မဟတ္တမဂန္ဓီသည် မီးရထားဖြင့် ခရီးသွားသည့်အခါ မည်သည့်အခါမှ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်းတွဲများ၌ မစီးဘဲ တတိယတန်းတွဲ၌သာ စီးလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတုန်းကလည်း မီးရထားဖြင့် ခရီးသွားရာ တတိယတန်းတွဲ၌ပါလာသော မဟတ္တမဂန္ဓီကို “ဂန္ဓီဂျီ ပထမတန်းတွဲ၊ ဒုတိယတန်းတွဲများမှ မစီးဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တတိယတန်းတွဲနှင့် ခရီးသွားနေရသလဲ”ဟု တစ်ယောက်က […]
ဘိုကေတာခင်ဗျား .. ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ တပေါင်းလ လဆန်းရက်က ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ဇာတိရွာကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇာတိရွာကိုတော့ ဘိုကေတာ သိပါတယ်။ တောင်သာမြို့နယ် ရသစ်ကျေးရွာပါ။ တောင်သာမြို့နယ်မှာ ပါတယ်ဆိုပေမယ့် မြင်းခြံကနေ သွားရတာပါ။ သိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ စကားနဲ့ပြောရရင် အလွန်အညာမကျတဲ့ အညာရွာပေါ့ဗျာ။ ရွာရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ငယ်သူငယ်ချင်း စိုးမြင့်ကိုခေါ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က မနက်တစ်ခေါက် ညနေတစ်ခေါက် လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ကုက္ကိုတန်းကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကုက္ကိုတန်းက […]
မုဆိုးအဖြစ်မှ သားကောင်ဘဝသို့ ငယ်စဉ်တုန်းက ဗိုလ်တာရာ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) ရေးသားသော စွန့်စားခန်းဝတ္ထုများတွင် ကျားက လူဆိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျားကိုပစ်သည့် အမဲလိုက်သမားက ဇာတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျားက နယ်ကျွံကာ ရွာတွေအနီးသို့ ရောက်လာပြီး ကျွဲနွားတွေကို ဝင်ဆွဲကာ သတ်ဖြတ်စားသည်။ ထင်းခွေ၊ ရေခပ်၊ ဟင်းရွက် ခူး၊ လယ်ထဲသွား အလုပ်လုပ်သည့်လူတွေကို ခုန်အုပ် ကိုက်ချီသွားသည်။ ထိုအခါ ရွာသားတွေက အမဲပစ်တော်သော ဇာတ်လိုက်ကို အကူအညီတောင်းရသည်။ ထိုဇာတ်လိုက်က ကျားကို […]
သြော်…ထနောင်း မဖူးတဖူးမှာပေါ့ ချောင်းဦး ဆရာရောက်ပြန်တော့ ပြောင်းဖူးခြောက်တွေ လှော်ကာကပ်ပြန်သနဲ့ တော်ရာဇရပ်မှာ တစ်ဝါဆိုလို့မို့ အညာတခို အထက်ကျေးဆီက… (ဆရာမှိုင်း) ချောင်းဦးကိုကျော်သွားရင် ခင်မွန်၊ မုံရွေးကို ရောက်တာပါပဲ။ မုံရွေးကတော့ ကျွန်တော့်ရွာပေါ့ဗျာ။ ခုချိန် တပေါင်းလမှာ ထနောင်း မဖူးတဖူး ဖြစ်ပြီပေါ့။ ရွာထိပ်မှာ သာလာယံ ဇရပ်ကြီးနဲ့ ထနောင်းတစ်ပင်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထနောင်းရိပ်မှာ နေခိုလို့ ဇရပ်ကြီးထဲမှာ တစ်ဝါတော့ မဟုတ်သော်လည်း ၃-၄ ရက် […]
Chin Shengt’an ဟာ ၁၇ ရာစုက အင်ပရက်ရှင်နစ် ဝေဖန်ရေးသမားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဟာ၊ ဘဝမှာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်များကို အမှတ်စဉ်ထိုးရေသတဲ့။ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဟာ မိုးတွေရွာနေတာကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ၁ဝ ရက်ကြာ ပိတ်မိနေတုန်းမှာ ရေတွက်ကြတာတဲ့။ “ဝါဝါတို့အိမ် အလည်သွားခြင်း” ထဲမှာ၊ ချင်ရဲ့ ပျော်စရာခဏများ ၄-၅ ခုလောက် မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ပျော်စရာခဏများ အားလုံးကို […]
ဓနိပင်များ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ပေါက်ရောက်နေသည့်စက်လှေဆိပ်မှာ ဆိပ်ခံတံတား မရှိ။ လှေအဆင်း မြေအတက် ဆက်သွယ်ပေးသည့် ကုန်းဘောင်ဟုခေါ်သောသစ်သားပြားမရှိ။ လှမ်းမြင်ရသမျှ ရွာထဲအဝင်လမ်းသည် ရေစပ်စပ်၊ ရွှံ့နွံထူထပ်သည့် မြေစိုစိုစွတ်စွတ်။ စက်လှေပေါ်မှ ကမ်းစပ်ဓနိတော ရွှံ့မြေပေါ် ခုန်ဆင်းလိုက်သည့်အခါ ဗွက်ထဲသို့ နစ်ဝင်သွားသည်။ ရွှံ့သည် ရာဘာလည်ရှည် ဖိနပ်၏ ခြေဖမိုးနေရာတစ်ခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့သည်။ ရွာကအမျိုးသမီးတွေနှင့် အတူတူဖြစ်အောင် ထဘီဝတ်လာခဲ့ရသော်လည်း တကယ်တော့ ကျွန်မ ဘောင်းဘီဖြင့်သာ လာချင်သည်။ အခုလို လှေအဆင်းမှာ လွှားခနဲ […]
သုစရိတစက်ဝန်း / ကိုတာ ရန်ကုန်။ မုံရွေးစာပေ၊ ၂၀၀၉။ စာ ၁၁၅ Facebook Comments
လမ်းပေါ်ကလူတယောက်ပြောချင်တာများ/ကိုတာ ရန်ကုန်၊ မုံရွေးစာပေ၊ ၂၀၁၆။ စာ ၈၇ ရေပေါ်လစီ၊ သယံဇာတနဲ့ ပဋိပက္ခလွန်ပြဿနာ ဖြေရှင်းပုံများ၊ ဘေဂဗေဒ သဘောတရားသစ်များ အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘောဂဗေဒနဲ့ လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်းအကြောင်း ပေါကော်လီယာ၊ ဟယ်လီနာနော်ဘာဂျ်-ဟော့ဂျ်၊ ရှူးမေကာ စတဲ့ ပညာရှင်များရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ပြန်လည် တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Comments
ပြုံးတဲ့ဂါထာများ / ကိုတာ ရန်ကုန်။ မုံရွေးစာပေ၊ ၂၀၀၈။ စာ ၁၃၉ သစ်ညှပ်ဟန်း (ကိုတာ မြန်မာပြန်) သစ်ညှပ်ဟန်း၏ အမှာစကား လူတိုင်းမှာ အနာအကျင်တွေ ရှိတယ်။ ဆင်းရဲတွေရှိတယ်။ ဒါပေတဲ့ အသက်ရှင်သန်တာဟာ ဒီတစ်ခဏလေးမှာလို့ ကျုပ်တို့ သိများ သိရင် အနာအကျင် အပင်အပန်းတွေကို လွှတ်ချပစ်လို့ရတယ်။ ပြုံးလို့ ရတယ်။ ဂါထာဆိုတာက ကဗျာအတိုလေးတွေ၊ နေ့စဉ်အလုပ်တွေ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ရွတ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ မမေ့မလျော့အောင် သတိရှိနေအောင် […]
(i) Days wake up with light at dawn, And I, with them, with love at heart. Suns shed their light, and I my love Inagarden which is embosomed With the bounds of the […]
စာဆိုဖြစ်လိုသော် (ဤဆောင်းပါးသည် ဂျာမန်စာဆိုကျော် ရိန်နာမာရီးယားရင်လ်ကေ (၁၈၇၅ – ၁၉၂၆) ထံမှ လူငယ်စာဆိုတစ်ဦးထံသို့ ရေးသားသော စာများထဲမှ ကောက်နုတ်ပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂ဝ ရာစုခေတ်အတွင်း၌ ထိပ်တန်းစာဆိုကျော်များဟု မငြင်းသာအောင် ထင်ရှားသော ဥရောပစာဆိုကျော်ဦးရေ အနည်းငယ်တွင် ရင်လ်ကေသည် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဂျာမနီ၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနိုင်ငံများ၌ လှည့်လည်နေထိုင်သည်။ အများသူငါ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အလေ့အကျင့်အနေဖြင့် ပြောနေကျ ဆိုနေကျ စကားများ၊ လုပ်နေကျ […]
စာဆိုဟူသည် အပိုင်း (၃)
ကောင်းကင်ဘုံထက်မှနေ၍ လူအနည်းငယ်အား စာဆိုဖြစ်စေသတည်းဟု ကျိန်ဆဲထားလိုက်ခြင်းကြောင့် လူသတ္တဝါတို့အဖို့ ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်လေခြင်း။ အက်ဖ်၊ အက်ဖ်၊ မိုးဝါး။ F. F. Moore (၁၈၅၅ – ၁၉၃၁) *** ရှေးရှေးခေတ်က စာဆိုများကိုရော နောက်နောက် ခုခေတ်စာဆိုများကိုပါ ငါငြီးငွေ့လာလေပြီ။ သူတို့အားလုံးသည် အပယိကနိုင်လှ၏။ တိမ်သော ပင်လယ်များသာဖြစ်၏။ သူတို့သည် နက်နက်နဲနဲလည်း မစဉ်းစားတတ်ကြ။ ထို့ကြောင့်ပင် သူတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည် အောက်ခြေသို့ မဆိုက်ရောက်။ သူတို့၏ […]
စာဆိုဟူသည် အပိုင်း (၂)
(ကဗျာဆရာ) စာဆိုဟူသော သဒ္ဒါပုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်မှ ကဗျာဓိုရ်စာဆို၊ စာရေးဆရာများက အသီးသီး ဝိဂြိုဟ်ပြုကြပုံ အနက်ဖွင့်ဆို ကြပုံများကို စုဆောင်းပြီး ပြန်ဆိုတင်ပြပါသည်။ စာဆိုများ၏ ကဗျာသီချင်းများတွင် ဖော်ထုတ်ထားသောအလှကို စာဆိုများ၏ စိတ်ကူးဉာဏ်အဆင့်နှင့်လိုက်အောင် အကယ်၍ သင့်ဝိဉာဉ်က မမြင်တတ်လျှင် သင်သည် ထိုစာဆိုများနှင့် ထိုကဗျာသီချင်းများကို ပြစ်မှားမိလေပြီ။ တီ၊ ဘီ၊ အဲလ်ဒရစ်ချ်။ T. B. Aldrich. (၁၈၃၆ – ၁၉ဝ၇) *** စာဆိုသည် […]
စာဆိုဟူသည် အပိုင်း (၁)
အို .. ကာရန်နှင့် လွတ်လပ်သော စပ်ထုံးများ၏ အရှင်သခင် ကဗျာစာဆိုအပေါင်းတို့ – မပျောက်မကွယ်ဘဲ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မြဲနေသည့် သင်တို့၏ကဗျာများအတွက် သင်တို့အား ငါက ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အဟမ်း .. အဟမ်း .. နေပါဦး။ အဲဒီကဗျာတွေထဲက ကဗျာတစ်ပုဒ်က ဘယ်လိုတဲ့။ အက်ဖ်၊ ပီ၊ အဲဒယ်မ်းစ်။ P. Adams. (၁၈၈၁ – ) *** စာဆိုဟူသည် အလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်သော လက်မှုအတတ် […]
ဂေဟကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်း ( မြန်မာ-၂၀၁၈) အပတ်စဉ်(၂) အစီအစဉ် သတင်းအချက်အလက် FREELAND Organization, Lashio, Northern Shan State, Myanmar. FREELAND Organization (လွတ်လပ်မြေ အဖွဲ့အစည်း) သည် လားရှိုးမြို့တွင် အခြေစိုက် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ FREELAND Organization (လွတ်လပ်မြေ အဖွဲ့အစည်း) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေးကိုအခြေခံ၍ လူမှုဘဝဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနှင့် […]
FREELAND Organization, Lashio, Northern Shan State, Myanmar. NextGENOA Eco Village Design Education Training (Myanmar) Batch -1 Information Package ဂေဟကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်း (မြန်မာ) အပတ်စဉ်(၁) အစီအစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃) ရက်၊ […]
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ဦးဆောင်ပြီး ဝါးပင်စိုက်လှုပ်ရှားမှုကြီး စလုပ်မည် အပူဒဏ် လျှော့ချ အရိပ်ရရန်၊ ရပ်ရွာစိမ်းလန်း စိုပြေ လှပရေး၊ မျှစ်နှင့် ဝါးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်နိုင်ရန် ဝါးအရင်းအမြစ် ပြုစုရန် ဝါးပင်စိုက် လှုပ်ရှားမှုကြီးတရပ်ကို ဒီနှစ် မေလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ရပ်ရွာပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် စတင်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ဝါးပင်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ ကြား စိုက်နိုင်ရန် စိုင်းပြင်းလျက် ရှိပါသည်။ […]
ကစားရင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရအောင် (Play for Peace)
ကစားရင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရအောင် (Play for Peace) သုခုမခရီးသည် ပြဇာတ်မှ ဖွင့်လှစ်သော “ကစားရင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရအောင်” (Play for Peace) သင်တန်းကို တက်ရောက်ချင်သူများ တက်ရောက်နိုင်ရန် ထပ်ဆင့် သတင်းပါးအပ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလကတော့ ဧပြီလ ၂၉ မှ မေလ ၁ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းတတ်ရောက်လိုသူများ ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါတယ်။ […]
Training for Social Change သင်တန်း
Training for Social Change သင်တန်း တွံတေးကွန်ရက်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ မှ စတင်၍ ရပ်ရွာပြည်သူခေါင်းဆောင်များအတွက် သင်တန်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် တွံတေး၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ သီလဝါ မြို့နယ်များနှင့် ပေါင်းကူးအဖွဲ့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Training for Social Change သင်တန်းကို ဧပြီလ (၃)ရက်မှ (၁၁)ရက်အထိ ရှမ်းပြည်၊ဟိုးပုံးမြို့နယ်၊ နောင်ခမ်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ မေတ္တာသင်တန်းရိပ်သာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ […]
ကဏ္ဍများ Select Category High·lights ကဗျာများ ကိုတာ ကိုတာ ဂျူး ဂျူး စားသံုးသူကာကြယ္ေရး စာအုပ်များ စိုင်း ဆမ်ခမ်း စောလူ ညီပုလေး နွဲ့ကေခိုင် ပညာေရး ပါရဂူ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗုဒၶဘာသာ ဘသန်း (ဓမ္မိက) ဘိုးလှိုင် မယ္ေလး မောင်ဒေး မောင်မြတ်ထင် မြင့်ဇော် မြင့်သန်း မြဝင်း(ဒဿန) ယဉ်ကျေးမှု လောကသာရကျောင်းများ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ အက်ဆေး သစ္စာ ညီညီ သတင်းများ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သိန်းမင်းစိုး သိန်းမော် အတ္ထုပ္ပတ္တိ အတွေ့အကြုံများ အမြင်များ အယ်ဒီတာ့အကြိုက် အွယ်ပီး ဥမ္မာထွေး ဦးယုဇန ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ေဘာဂေဗဒ ေမာင္လင္းၾကည္ ေဝါဟာရမ်ား
© 2016 သာလာယံ. All Rights Reserved. Chalk & Slate.